Candy Crush nhanho 677 kubiridzira uye matipi - Pipi Crush Game - Free Lives Tips Cheats Hints
Pipi Crush Game - Free Lives Tips Cheats Hints
Pipi Crush Kubiridzira
danho 29 Rubatsiro
danho 33 Rubatsiro
danho 65 Rubatsiro
Pipi Crush Pipi Tsananguro
Tamba Pipi Crush paPC
Pamusoro Matipi ePipi Crush
Joinha timu yedu
You are here: Home / Uncategorized / Candy Crush nhanho 677 kubiridzira uye matipi
Candy Crush nhanho 677 kubiridzira uye matipi
Last updated on Chikunguru 12, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Maslow's hierarchy yezvido inotsanangura zvakajeka mazinga akasiyana ezvido izvo munhu anazvo. Inotsanangurawo marongerwo ayo vanhu vanoda kuti izvi zvizadziswe. Zvido izvi ndezvenyama, chengetedzo, social, ego, uye kuzviremekedza. Candy kupwanya mutambo unokubatsira kuzadzisa zvaunoda munzanga nenzira yepamusoro iyo varume vemazuva ano vanoziva. Candy Crush inokubatsira kubatana uye kukwikwidza nevanhu pasi rese. Vanhu vanowana chimiro chavo cheInternational mumutambo. Uyezve, izvi zvinoburitsa kukwikwidzana mukati mako uye zvinobatsira kukura semunhu. Vanodzidza nekudzidzira hunhu pano hunogona kushandiswa muhupenyu hunoshanda zvakare.
Vashandisi vanonzwa kuti vari vega, nekumira kwepasirese uye mabasa akasiyana anoita kuti ude kuramba uchiedza, zvakare uye zvakare, kuvaka mweya yevatambi vechikepe mukati mako uye inokupa pfungwa yekuita. Izvi zvakakosha kwazvo kuti ukwanise kutora mune-zvese kubudirira uye kukundikana kwemutambo, asi kupa kusimudzira zvishoma mupfungwa yekubudirira isu tiri pano kuti tikupe iwe Candy Crush nhanho 677 kubiridzira uye matipi.
Iyi nhanho ine chinangwa chekuwana maodha e 10 ane mitsetse zvihwitsi uye kubviswa misanganiswa zvihwitsi. Izvi hazvisi zvese paunenge uchiita izvi unofanirwa kuwana zvibodzwa zvishoma 20,000 pfungwa uye uku hakusi kuguma, zvose izvi zvinofanira kuitwa muchidimbu 35 matanho. Kana iwe uchikwanisa kuzadzisa chinangwa cheyero usingapfuure muganho wako wekufamba, unenge wabudirira padanho. Zvinoita sezviri nyore, hazvidaro? Zvakanaka, mutambi wenguva dzose anoziva kuti izvi zvingada maawa ekuronga uye kuedza, uye nokukundikana kuzhinji, you will win by chance. Zvisinei, kukubatsira kuhwina kwako isu tiri kukupa Candy Crush nhanho 677 kubiridzira uye matipi kupaza nhanho iyi uye kuenderera mberi nerwendo rwako munyika yeCandy Crush Saga!
Candy Crush Level 677 Cheats uye mazano
Pazasi zvakataurwa Candy Crush Level 677 Cheats uye mazano kuita kuti rwendo rwako rweCandy Crush Saga ruve nyore uye runonakidza:
Icho chipingamupinyi chikuru cheiyi nhanho iLoco rise Xs sezvo vari ivo vanovharira zvihwitsi zvako zvakabviswa. Inokurudzirwa kuti usatambise nguva yako, kana kufamba, pamameringues mashoma. Iwe unofanirwa kubvisa iyo Licorice kuruboshwe uye kurudyi uye wobva watanga kuunganidza iwo ane mitsetse zvihwitsi uye kuzadzisa chinangwa chako.
Obsession with anything is bad. Especially, zvakaipa kana tiri kutaura nezvenguva mabhomba anoramba achionekwa mumutambo. Usanetseka pamusoro pavo. Sezvineiwo, ndicho chikamu chemhinganidzo. Just go with it, asi zvishandisei nokuchenjera. Uyezve, zviise mumakombi akasiyana, uye tora zvihwitsi zvakawanda zvisina basa sezvinobvira.
Shandisa manejimendi ako uye hunyanzvi hwekuronga, govana mafambiro ako nenguva. Paavhareji, unofanira kuwana siwiti ine mitsetse pakufamba kwese kwechitatu, zvino ichi chinofanira kunge chiri chinangwa chako chidiki. Kuti uwedzere mukana wako wekukunda: edza kubvisa mamwe mabhuroki kubva kunharaunda yepasi yebhodhi. Hence this would start a chain reaction resulting in a higher probability of getting combinations of striped candies.
Candy Crush Level 410 Cheats uye Tips
Candy Crush Level 419 Cheats uye Tips
Candy Crush Level 1442 Cheats uye Tips
Candy Crush Level 500 kubiridzira uye matipi
Candy Crush Level 437 kubiridzira uye matipi
Candy Crush Level 419 kubiridzira uye matipi
Candy Crush Level 136 kubiridzira uye matipi
Candy Crush Level 3914 kubiridzira uye matipi
Candy Crush Level 2229 kubiridzira uye matipi
Candy Crush Level 829 Matipi uye manomano
Candy Crush Level 136 Cheats uye Tips